मादक मिर्गी के हो
केही मानिसहरू आफ्नो शरीर गम्भीर कुरा खतरा छ पनि जब पिउन गर्न इच्छुक छन्। रक्सी - एक विष छ, र यो को अत्यधिक प्रयोग राम्रो केहि गर्न नेतृत्व गर्न सक्दैन। तथ्याङ्क रक्सी निरन्तर संसारभरिका मानिसहरूको untold नम्बर मर रहेको छ भन्ने पुष्टि गर्नुहोस्। अधिमात्रा, विषाक्तता, दोषपूर्ण उत्पादन, धेरै रोगहरु रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था को समस्या को कारण छन् - यो देखि प्रतिरक्षा छ, कुनै पिउने मानिस। साथै, उहाँले रक्सी र मिर्गी देखि प्रतिरक्षा छ।
यो एक धेरै गम्भीर रोग हो। यो नियम, अकस्मात उत्पन्न कि दौरा शामिल रूपमा देखिन्छ। व्यक्ति चेतना र आफ्नो खुट्टामा खडा गर्ने क्षमता हराउछ आक्रमण समयमा, अनुहार सुरुमा रंग हराउछ, र त्यसपछि नीलो बारी। आक्रमण समयमा यसलाई आफ्नो जिब्रो बन्द क्षति हुनेछ सम्भावना छ। जफती उल्टी र प्रशस्त सँगसँगै फोम मुख। चेतना मात्र पछि convulsions पूर्ण बन्द फर्के। सामान्यतया व्यक्ति तुरुन्तै हमला पछि सुतेको पर्छ। यो आफ्नो दौरा शामिल समान छन् किनभने अक्सर साधारण मिर्गी संग, भ्रमित छ, तर तिनीहरूलाई बीच फरक धेरै उच्च छ।
मादक मिर्गी केही सार्नु पछि देखा पर्न सक्छ रक्सी विषाक्तता। यो अन्यसरोगेट र denatured रक्सी संग विषाक्तता को विशेष गरी साँचो हो। सबै भन्दा साधारण मादक मिर्गी पहिले एक टाउको चोट, संक्रामक रोग, वा atherosclerosis भोगे भएकाहरूलाई सामान्य छ।
यो रोग विभिन्न तरिकामा नै प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ:
कडाई बोल्ने, दौरा शामिल;
ऐंठन, मांसपेशी संकोचन जलन।
मादक मिर्गी र यो मात्र होइन शरीर तर पनि मन असर कि भयानक। यो मिर्गी पिन्चे संग मान्छे, अक्सर कहिलेकाहीं आफ्नै कार्यहरू मा महसुस छैन परिस्थितिको अपर्याप्त प्रतिक्रिया। तिनीहरूले साँच्चै hangover छोड्न सक्दैनौं, अक्सर आफूलाई मा बारी स्थिर निराशा अधीनमा छन्। विरामीहरु निरन्तर घरमा भ्रष्टाचार, आफ्नो स्थिति काम सामान्य अनुमति गर्दैन र तरिका समाज अन्तरक्रिया गर्नुहोस्।
धेरै मानिसहरू जन्मजात मिर्गी मादक प्रसारित कि बारे आश्चर्य। जवाफ छ - छैन। यो प्राप्त रोग हुन्छ कि जब छ दस वर्ष को लागि एक व्यक्ति दुर्व्यवहार रक्सी। तर, मादक मिर्गी भयो र छोटो अवधि पछि जहाँ अवस्थामा छन्, तर यो एक व्यक्ति साँच्चै पनि औसत alcoholics तुलनामा धेरै पिए गर्दा मात्र हो।
रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था मान्छे विरामी मिर्गी जहाँ उपचार गर्न जान्नु आवश्यक छ। सामान्य मा, हामी को छुटकारा रही मात्र रक्सी पूर्ण renunciation को माध्यम द्वारा हुन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यहाँ धेरै अवस्थामा एक व्यक्ति पिउने रोक्छ गर्दा हो, दौरा शामिल बेपत्ता, र उहाँले पुरानो फिर्ता लिएको थियो। अचम्मको कुरा छैन, धेरै चाँडै उहाँले आफ्नै उल्टी र र्याल मा तल्ला फेला परेन। पहिले नै मात्र होइन शरीर तर पनि मन प्रभावित भएको आक्रमण समयमा माथि उल्लेख गरे। यो मस्तिष्क अर्को जफती खडा गर्दैन सम्भव छ, र मानिस एक वास्तविक सार्न जो सक्नुहुन्छ न न त बोल्न "तरकारी", मा गरियो। पनि आक्रमण समयमा (वा पछि) हृदय अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, पीडित कलेजो, फोक्सोमा, अन्तस्करणले र यति मा।
यसलाई त्यहाँ, एक पल्ट र सबै को लागि रक्सी संग गाँसिएको एक पटक मादक मिर्गी को आक्रमण अनुभव गर्नेहरू भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यो कहिलेकाहीं एक व्यक्ति आफ्नो अवस्थाको गम्भीरता महसुस गर्न भन्ने तथ्यलाई गर्न, यो तनाव धेरै मार्फत जान आवश्यक छ कारण छ। निस्सन्देह, विशेष गरी जब यो अनुमति छैन बाँच्न र रक्सीको दुरुपयोग कहिल्यै यो जीवनमा स्वस्थ हुन, चाहने सबैलाई।
आंतों बाधा लक्षण, उपचार। छोराछोरीको आंतों बाधा: लक्षण
रूस र गहिरो शिरा घनास्त्रता: साँच्चै कि एक खतरा?
कटि sciatica: कारण, लक्षण, उपचार
विन्डोज अपडेट 10 कसरी जाँच र आवश्यक भएमा यसलाई हटाउन?
कसरी आफ्नो हातमा फल एक फूलगुच्छा बनाउने?
पाब्लो Pineda: जीवनी, फोटो, Filmography डाउन सिन्ड्रोम को फारम
Borovitsky पहाडी: एक संक्षिप्त विवरण र इतिहास
Pancreatin, को सङ्केत गर्छ, औषधिको खुराक, साइड इफेक्ट र protivopokazniyam गर्न निर्देशन
अस्पताल "बेलारुस" (सोची) को समीक्षा। अस्पताल "बेलारुस" (सोची): वर्णन, अवस्था, फोटो
Pastern हड्डी: संरचना र कार्य